တောင်ကိုရီးယား လုပ်ငန်းရှင်များ၏ ကိုယ်ထိလက်ရောက်မှု တိုင်ကြားမည် | ဧရာဝတီ
ကြယ်ပြာ| October 2, 2012 | Hits:8,889
| | တောင်ကိုရီးယား ပညာရှင်၏ ကိုယ်ထိလက်ရောက် ကျူးလွန်မှု ခံခဲ့ရသည့် အထည်ချုပ် အလုပ်သမ နှစ်ဦး (ဓာတ်ပုံ – ကြယ်ပြာ / ဧရာဝတီ)
မြန်မာနိုင်ငံတွင် အထည်ချုပ်လုပ်ငန်း ရင်းနှီးမြှုပ်နှံကြသည့် တောင်ကိုရီးယား လုပ်ငန်းရှင်တချို့က မြန်မာအမျိုးသမီး အလုပ်သမား များအပေါ် လုပ်ငန်းခွင်တွင်း ကိုယ်ထိလက်ရော်စော်ကားမှု များပြားလာသည့်အတွက် မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ ကိုရီးယားသံရုံးနှင့် ကိုရီးယားနိုင်ငံသို့ အသိပေး တိုင်ကြားစာများ တရားဝင် ပေးပို့မည်ဖြစ်ကြောင်း မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ အလုပ်သမားသမဂ္ဂ အဖွဲ့ချုပ်မှ အလုပ်အမှုဆောင် ဦးအေးချိုက ပြောသည်။
ရန်ကုန် စက်မှုဇုန်များရှိ အထည်ချုပ်စက်ရုံများတွင် တောင်ကိုရီးယား အလုပ်ရှင်တချို့က မြန်မာအမျိုးသမီး အလုပ်သမားများ အပေါ် ကိုယ်ထိလက်ရောက် ကျူးလွန်များနှင့် လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ စော်ကားမှုများ ရှိနေသဖြင့် ပြစ်မှုကျူးလွန်သူများ၏ အမည်၊စက်ရုံ အမည်နှင့် ပြဿနာ ဖြစ်ရသည့် အကြောင်းရင်းများအား အသေးစိတ် ဖော်ပြ၍ ကိုရီးယား သံရုံးနှင့် ကိုရီးယားနိုင်ငံရှိ ကိုရီးယား အလုပ်သမားများ သမဂ္ဂ အဖွဲ့ချုပ်ထံသို့ ပေးပို့သွားမည်ဟု သူက ဆိုသည်။
“ဒီလိုကျူးလွန်သူတွေကို ကျနော်တို့ နိုင်ငံမှာ လုံးဝ အလုပ်ပြန်လာလုပ်ခွင့် မရှိအောင် အထိကို သူတို့ဘက်က အဖွဲ့တွေနဲ့ ညှိသွားမယ်။ အလုပ်သမားတွေ ဘက်ကလည်း မကျေနပ်လို့ တရားပြန်စွဲချင်တယ် ဆိုရင် ကျနော်တို့ အဖွဲ့က ရှေ့နေတွေက အခမဲ့ ကူညီပေးသွားမှာပါ” ဟု ဦးအေးချိုက ပြောသည်။
ပြီးခဲ့သည်စက်တင်ဘာ ၂၈ ရက်နေ့က ရန်ကုန် လှိုင်သာယာမြို့နယ်တွင် ရှိသည့် The Myth Appalel Myanmar အထည်ချုပ် စက်ရုံရှိ အလုပ်သမ မစမ်းသူဇာနှင့် ရင်သားကင်ဆာ ဝေဒနာ ခံစားနေရသူ တခြား အလုပ်သမ တဦးအား တောင်ကိုရီးယား လူမျိုး ပညာရှင်က ကိုယ်ထိလက်ရောက် ရိုက်နှက်ရာမှ ရင်သား ကင်ဆာ ဝေဒနာ ခံစားနေရသည့် အမျိုးသမီးမှာ အတွင်းဒဏ်ရာ ရသွားခဲ့ပြီး မစမ်းသူဇာမှာ ခြေချောင်း တချို့ ကျိုးကျေသွားခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
“စက်ရုံထဲကနေ အလုပ်သမားရုံးကို သွားမယ်ဆိုရင် အလုပ်ထွက်စာ ရေးရမယ်ဆိုပြီးတော့ အတင်းအကျပ် ရေးခိုင်းတယ်၊ မရေးလို့ ဆိုပြီးတော့ စာရွက်တွေကို ကိုင်ပေါက်ပြီး ဆဲတယ်၊ စော်ကားမော်ကားလည်း ပြောပါတယ်” ဟု မစမ်းသူဇာအောင်က ပြောသည်။
တောင်ကိုရီးယားပညာရှင်၏ လုပ်ရပ်အပေါ် မကျေနပ်သည့် ကာယကံရှင် အမျိုးသမီးနှစ်ဦးနှင့် လုပ်ဖော်ကိုင်ဘက် ၀န်ထမ်း ၃၂ ဦးတို့က လှိုင်သာယာမြို့နယ် အလုပ်သမားညွှန်ကြားမှု ဦးစီးဌာနသို့ သွားရောက် တိုင်ကြားခဲ့သည့် အတွက် စက်တင်ဘာ ၃၀ ရက်နေ့ မနက် ၁၁ နာရီတွင် အလုပ်သမားရုံး၌ အလုပ်သမားညွှန်ကြားမှု ဦးစီးဌာနမှ ဦးစီးအရာရှိနှင့် ကုမ္ပဏီ ဘက်မှ အထွေထွေ မန်နေဂျာတို့ ညှိနှိုင်း ခဲ့ကြကြောင်း၊ ညှိနှိုင်းမှု အပြီးတွင် မစမ်းသူဇာအောင်ကို ကျပ် ၇ သိန်း၊ အတွင်းဒဏ်ရာ ရသွားသော မသူဇာနွယ်အား ကျပ် ၅ သိန်းပေးလျော်ပြီး စာချုပ် ချုပ်ဆိုကာ ကျေအေးလိုက်ကြသည်။
သို့သော် ယင်း အလုပ်သမားများမှာ အလုပ်ဆက်လက် လုပ်ဆောင်လိုခြင်း မရှိတော့ကြောင်း ပြောဆို၍ ၀န်ထမ်း ၃၄ ဦးစလုံး အလုပ်မှ နုတ်ထွက်သွားကြောင်း၊ ၎င်းအလုပ်သမားများမှာ အလုပ်သမားရုံးသို့ သွားရောက် တိုင်ကြားခဲ့သည့် အတွက် အလုပ်ရှင်က အလုပ်ထွက်ရန် ဖိအားပေးခြင်း ခံခဲ့ရကြောင်း သိရှိရသည်။
အထည်ချုပ် စက်ရုံများတွင် အလုပ်လုပ်ကိုင်နေသည့် အမျိုးသမီးအများစုမှာ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ အနှောင့်အယှက် ပြုခြင်း ခံနေရသော်လည်း ယင်း ကိစ္စများနှင့် ပတ်သက်၍ ပိုင်ရှင်များအား တိုင်းကြားသည့်အခါ တစုံတရာ အရေးယူပေးခြင်း မရှိကြောင်း၊ ရဲစခန်းများကလည်း အလုပ်ရှင်များနှင့်ပေါင်း၍ အမှုဖွင့်ပေးခြင်း မရှိကြောင်း The Myth Appalel Myanmar အထည်ချုပ်စက်ရုံက ၀န်ထမ်းများက ပြောသည်။
ရန်ကုန်တိုင်း ဒေသကြီး အလုပ်သမားညွှန်ကြားမှု ဦးစီးဌာနမှ တာဝန်ရှိသူ တဦးက ယခုကဲ့သို့ ကိုယ်ထိလက်ရောက် ကျူးလွန်မှုများသည် အလုပ်ရှင် အလုပ်သမား ပြဿနာအဆင့်ထက် ကျော်လွန်နေသောကြောင့် ရဲစခန်းတိုင်သင့်သည့် အခြေအနေ များသာဖြစ်ကြောင်း၊ အလုပ်သမား ၀န်ကြီးဌာနအနေဖြင့် ညှိနှိုင်းဖျန်ဖြေ ပေးရုံမှလွဲ၍ မည်သို့မှ လုပ်ဆောင် ပေးနိုင်စွမ်း မရှိသေးကြောင်း ဆိုသည်။
“အလုပ်သမား ၀န်ကြီးဌာနအနေနဲ့ ပြဿနာကို ဖြေရှင်း ပေးချင်ယောင်ဆောင်ပြီးတော့ စာချုပ်တွေနဲ့ ကျေအေး ခိုင်းနေတာက ဥပဒေကို ချိုးဖောက်နေတာပဲ။ ကိုယ့်လူမျိုးတွေ ကိုယ်၌က ကိုယ့်ဘက်မပါတော့ ဒီကိစ္စတွေက နောက်လည်း ဆက်ဖြစ် နေဦးမှာပဲ” ဟု စီးပွားရေး ဥပဒေ လမ်းညွှန်ပညာရှင် တဦးဖြစ်သည့် ဦးတင်သန်းဦးက ပြောသည်။
ကိုရီးယား အလုပ်ရှင်များသာမက တခြားလူမျိုး လုပ်ငန်းရှင်များက အလုပ်သမားများအပေါ် အနိုင်ကျင့်ခြင်းများ ရှိနေသော်လည်း ယခုနှစ်ပိုင်းအတွင်း ကိုရီးယားအလုပ်ရှင်နှင့် မြန်မာအလုပ်သမား ပြဿနာများ ပိုများလာသည့်အတွက် ပထမဆုံး နမူနာအနေဖြင့် ကိုရီးယား အလုပ်ရှင်များကို တိုင်ကြားသွားမည် ဖြစ်ကြောင်း မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ အလုပ်သမားသမဂ္ဂ အဖွဲ့ချုပ်မှ သိရသည်။
ပြဿနာဖြစ်နေသော တောင်ကိုရီးယားလုပ်ငန်းရှင်နှင့် ပညာရှင် များအား အရေးယူဆောင်ရွက်ခြင်း ရှိ၊ မရှိ ရန်ကုန် အခြေစိုက် တောင်ကိုရီးယား သံရုံးမှ တာဝန်ရှိသူအား ဆက်သွယ် မေးမြန်းသော်လည်း ဖြေကြားပေးရန် ငြင်းဆိုခဲ့သည်။
တိုင်ကြားမှုများအပေါ် အရေးယူရာတွင် ပြဿနာဖြစ်သည့် စက်ရုံအား တောင်ကိုရီးယား အလုပ်သမားများ သမဂ္ဂ အဖွဲ့ချုပ်မှနေ၍ တရားဝင် သတိပေးစာ ပို့ခြင်းမှ စ၍ နိုင်ငံတကာက ယင်းစက်ရုံထုတ် ပစ္စည်းများအား လက်သင့် မခံတော့သည် အထိ အရေးယူခြင်းများ လုပ်ဆောင်နိုင်ကြောင်း သိရသည်။
Tatoethiha Thiha October 2, 2012 - 4:56 pm koreaနိုင်ငံကိုတိုင်နေစရာတောင်မလိုပါဘုးသူဟာကျွန်တော်တို.မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိနေတဲ.အတွက်ကြောင်.မြန်မာနိုင်ငံဥပဒေနဲ.အရေးယူလို.ရပါတယ်။koreaမှာရှိနေတဲ.မြန်မာတွေလဲပြစ်မှု.ကျုးလွန်ရင် korea ဥပဒေနဲ.ဘဲအရေးယူခံရတာပါဘဲ။korea နိုင်ငံသားဆိုပြီးကြောက်နေစရာမလိုပါဘူး။
Reply တိုးတိုး ကဗျာ October 2, 2012 - 10:30 pm ကျန်တော်က ထိုင်းမှာနေတာပါ ကိုးဒီးယားတွေ စိတ်ကို သိသင့်သလောက်တော်တော်သတိထားမိနေပါတယ် ကိုးဒီယားတွေက ကောက်ကျစ်တယ် ၇ိုင်းတယ် ဂတိမတည်တတ်ဘူး ညစ်ပတ်တယ် ထိုင်းလုပ်ငန်းပိုင်ရှင်တွေဟာ မသိခင်တုန်းက သိုးေ၇ချုံထားတဲ့ဝံပလွေ ကိုးယားတွေရဲ့ဓံကို တော်တော်လေးလူးလဲခံခဲ့၇ဘူးပါတယ် အခုဆို ထိုင်က ကိုးယားတွေကို လုပ်ငန်းနဲပက်သက်ပြီး နေ၇ာမပေးတော့ပါဘူးကျန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံ တိုးတတ်မှူလမ်းကြောင်းပေါ်မှာ အထူးသိထားသင့်တာ ထိုင်း နဲ့ ကိုးဒီးယားပါ ဘယ်လိုမှ အပြည့်ဝယုံလို့မ၇သူတွေပါ………….ကျန်တော်သတိထားမိသလောက်ပါ….ကျေးဇူးတင်ပါတယ်…..နေမျိုး…ခေတ္တ phuket
Reply lin tun October 3, 2012 - 9:38 am အဲ့ဒါမဖြစ်သင့်တဲ့ကိစ္စဘဲဗျာ၊၊ ကျွန်တော်ကကိုရီးယားမှာလက်ရှိအလုပ်လုပ်နေတဲ့အလုပ်သမားတစ်ယောက်ပါ။ မြန်မာနိုင်ငံမှာမပြောနဲ့ အခုကိုရီးယားမှာတောင်လုပ်ငန်း၇ှင်ကအလုပ်သမားတွေကိုကိုယ်ထိလက်ရောက်၇ိုက်ဖို့မပြောနဲံဆဲတာတောင်ကျယ်ကျယ်လောင်လောင်မဆဲရဲဘူး။ အခုကိုယ့်မြန်မာနိုင်ငံမှာဒိလိုဖြစ်တယ်ဆိုတော့အံ့သြဖို့တောင်ကောင်းတယ်။တာဝန်ရှိသူတွေ ဒိအတိုင်းကြည့်မနေပါနဲ့အရေးယူပေးပါ။ နို့မို့ဆိုယင်ဒိကောင်တွေက တခါလုပ်လို့ရယင် လုပ်လို့ရတယ်ဟေ့ဆိုပြီးတော့ အမြဲတမ်းလုပ်တတ်တဲ့အကျငိ့်ရှိတယ်.
Reply kyawsan myanmar October 3, 2012 - 12:37 pm Please hell out these bastard Korean, give the lesson to them strongly by law. We have to defend our people. They are too rude.
Unity ဂျာနယ် သတင်းသမားများအပေါ် ချမှတ်ထားသည့် ပြစ်ဒဏ် ၁၀ နှစ်ကို ၃ နှစ်လျှော့